Izindawo eziphazamisayo ezi-5 zokujabulela i-Halloween | Izindaba Zokuhamba
Izindawo ezi-5 zokuzithokozisa ukujabulela i-Halloween
Maria | | Izindlela zokuphunyuka, Ukuzilibazisa
I-Halloween, iholide lamaqaba eliphila kunawo wonke ekhalendeni, ilapha unyaka owodwa. Isikhathi, iHollywood kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke kusabalalise lelisiko lama-Anglo-Saxon emhlabeni wonke ukuxubana namasiko ehlukene, kwavusa iphathi lapho okuvamile, ukwesaba, ukufa, imvunulo kanye nesifiso sokuzijabulisa kujwayelekile.
Izwe ngalinye ligubha i-Halloween ngendlela ehlukile, ngakho-ke uma unethuba lokuhamba ku-All Saints Bridge, sikucebisa ukuthi ubheke lokhu okuthunyelwe okulandelayo ngoba uzothola lapho Izindawo eziphazamisayo zokuchitha i-Halloween yokufa futhi, ngaphezu kwakho konke, ziyivelakancane.
Idolobha lothando lisimema ukuthi sichithe ubusuku obusabekayo emangcwabeni aseParis ngesikhathi se-Halloween. Labo abanesibopho baklame umsebenzi ozosenza sizizwe sesaba kakhulu ngobusuku bokufa.
Amathuna amathuna aseParis akha inethiwekhi yemigudu esebenza njengamathuna ezinkulungwane nezinkulungwane zabantu. Kulinganiselwa ukuthi izinsalela ezifayo okungenani eziyizigidi eziyisithupha zingcwatshwe emhubheni ongaphezu kwamakhilomitha angama-300 aziqambayo.
Esikhathini esidlule le mihubhe yayaziwa ngokuthi izinkwali zaseParis ngoba kulapha lapho kukhishwa khona itshe lekalika okwakudingeka ukwakha ingxenye enhle yamatshe esikhumbuzo enhlokodolobha yaseFrance.
Ngekhulu le-XNUMX kwathathwa isinqumo sokuthuthela lapha ngenxa yezizathu zomphakathi wonke amathambo ayelele Emathuneni Abangenacala. Kanjalo kwavela imigede yokungcwaba.
Uma uthi nhlá, imigede yokungcwaba yaseParis iyindawo ethusayo njengoba igcwele amathambo omuntu nezingebhezi. Kodwa-ke, lezi zibekwe zakha izakhiwo zobuciko ezihlaba umxhwele kakhulu.
Uma ucabanga ukuthatha uhambo oluya eParis phakathi neHalloween, sikucebisa ukuthi uvakashele amakhathakhathi ukuze wenze uhlelo oluhlukile ngesikhathi uhlala khona. Zitholakala ku-avenida del colonel uHenri Roi-Tanguy, 1. Intengo yokwamukelwa okujwayelekile ngama-euro ayishumi futhi amahora enwetshelwa ngesikhathi saleli holide kuze kube ngu-10: 20 ebusuku.
Isiqhingi SamaDoli eMexico siyindawo ebukekayo nehlekisayo edume kakhulu kubavakashi ngesikhathi se-Halloween.
Ukuhamba kancane uzungeze isiqhingi kwanele ukukwenza ufune ukubalekela lapho. Isizathu? Igcwele onodoli abacwiyiwe nabanqunywe amakhanda futhi izinsalela zabo zisakazeke phansi zathola ukubukeka kwe-macabre kanye ne-creepy.
Umdali weSiqhingi SamaDoli wayengumakhelwane wale ndawo, okwathi ngelinye ilanga wahlangana nesidumbu sentombazane eyayicwile exhaphozini lakhona, ngenhlanhla.
Ngemuva kwesikhashana waqala ukuzwa ukububula kwentombazane ekhonondayo futhi ikhala ngakho, wethuka kakhulu, wazama ukuxosha imimoya emibi endaweni ngokugcwalisa indawo ngonodoli abaphukile.
Kulezi zinsuku, njalo nge-Halloween, abantu abaningi banquma ukuchitha ubusuku babafileyo esiQhingini SamaDoli ukuze bahlole isibindi sabo futhi bazame ukulalela imimoya lowo makhelwane ayevame ukukhuluma ngayo.
Labo abanesifiso sokuvakashela isiQhingi samadonki aseXochimilco bangafika ngokuthatha isikebhe eCuemanco noma eFernando Celada piers, eningizimu yeMexico City. Futhi, uma ukhetha ukuvakashela neziteshi, lolu hambo lungahlala phakathi kwamahora amathathu kuya kwamane .
Emithambekeni yeMoncayo, ebangeni elingamakhilomitha ambalwa ukusuka esigodlweni sezindela saseCistercian saseVeruela, iTrasmoz, okuyidolobha laseZaragoza elidume ngokuba ukuphela kwedolobha elixoshiwe eSpain.
Kwakuyiminyaka yekhulu leshumi nantathu lapho ukukhishwa nge-oda likapapa kwenzeka. Kunezimbangela eziningi ezingaholela kuleli banga, kepha ezimbili zigqamile: iqiniso lokuthi uMqhele wase-Aragon wawunika amalungelo athile awabeka endaweni ezuzisa kakhulu maqondana nabanye omasipala nokuthi enqabeni yayo imali yamanga kubhalwe ukuthi kwavukuza imali engenayo yaseVeruela. Kodwa-ke, kunenganekwane futhi esakazwayo ethi izenzo zobuqaba kanye nama-covens ayehlala ngaphakathi enqabeni ngaleso sikhathi naphezu kokulawulwa okuqinile okwenziwa isigodlo sezindela saseVeruela endaweni ezungeze leli dolobha.
Ukuxoshwa kanye nokuthi imbongi ethandwayo yaseSpain uGustavo Adolfo Bécquer yaphefumulelwa isigodlo saseTrasmoz ngezinganekwane zayo ngobuthakathi kanye nama-covens ngesikhathi ihlala esigodlweni saseVeruela, kwasiza ekusabalaliseni udumo lwaleli dolobha njengesiqalekisiwe.
Njengamanje kunezakhamizi ezingama-80 ezibhaliswe lapha futhi azithinteki kulesi simo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yalezi zindaba ezimnyama, amakhulu ezivakashi avakashela iTrasmoz minyaka yonke. Leli dolobha linomnyuziyamu onikelwe ubuthakathi kanti njalo ehlobo kunombukiso onikelwe abathakathi, imilingo nezitshalo zokwelapha eziheha abantu abaningi abafuna ukwazi.
Ngesikhathi se-Halloween, i-El Embrujo Cultural Association ithole ingxenye yenkambiso yakudala yamaCelt yobusuku bemiphefumulo futhi njalo ngo-Okthoba 31 igubha “Ukukhanya kwemiphefumulo” lapho omakhelwane nezivakashi behlanganyela khona.
Kuleli dolobha laseMelika uzothola okuyiyona ndlu ehlasimulisa umzimba kunayo yonke eyake yaba khona. Izivakashi eziningi zichaze lesi sithabathaba se-movie eshaqisayo seqiniso empilweni yangempela., ngakho-ke uma wesaba iMcKamey Manor akuyona indawo yakho yokuchitha le Halloween.
Kungabukeka kuyihaba ukuthi kube yindlu yokwesaba kepha uma sibheka izidingo zokungena kuyo sizoqonda kangcono ukuthi labo abanesibindi abazama ukufaka unyawo ngaphakathi bangadalulwa kuphi:
Iba ngaphezulu kweminyaka engu-21
Yiba nempilo enhle
Sayina idokhumende elithatha umthwalo wemiphumela yokwesaba.
Angazi ngawe, kepha izimo ezimbili zokugcina zingenze ngakhululeka ngingakwazi ngisho nokuvakashela iMcKamey Manor. Futhi akuwona umsebenzi olula ngoba kunohlu lokulinda lwabantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili. Ngaphezu kwalokho, abantu ababili kuya kwabane kuphela abangangena ngasikhathi sinye ngakho umsunguli walesi sikhangiso, uRuss McKamey, usebenza kanzima nabo ukubenza babe neHalloween abangasoze bakhohlwa.
Kepha luhlobo luni lwendlu eyethusayo iMcKamey Manor? Ngokusobala enye yalezo ezidala ukwesaba okukhulu kanye nengcindezi okuphoqa izivakashi eziningi ukuthi zishiye isekethe. Empeleni, bambalwa kakhulu abakwaziyo ukukuqedela njengoba uhambo lungahlala phakathi kwamahora amane kuya kwayisikhombisa.
Kukho konke ukuhambela, izidalwa zamademoni, ama-zombies, izilo nazo zonke izinhlobo zezidalwa ezimbi zizovela zinikeze abasebenzi abasebenzi kuwo wonke amakamelo endlu ngenkathi ulwazi lurekhodwa kwividiyo ngamakhamera.
Ekupheleni kwekhulu le-1888 leminyaka, inganekwane kaJack the Ripper yazalelwa eLondon lapho ngo-XNUMX kwavela isidumbu sokuqala sesifebe endaweni yaseWhitechapel, ngaleyo ndlela saqala uhlu olude lwamacala asabalalisa ukwesaba enhlokodolobha yaseBrithani.
Amaphoyisa awakaze ambambe, kepha namuhla amakhulu abantu azulazula emigwaqweni yase-East End kumkhondo wakhe. Umzila weJack the Ripper ungenziwa wedwa noma njengengxenye yomzila oqondisiwe osibuyisela ezikhathini zama-Victorian futhi usinikeze i-akhawunti ejulile yalokho okwenzekile ngenkathi uvakashela izindawo okwenzeka kuzo ukubulawa kwabantu.
I-All Saints Bridge yisikhathi esihle sokubalekela eLondon futhi wenze uhlelo oluhlukile lwe-Halloween njengalo mzila.
Njengokulangazelela, qiniseka ukuthi uvakashela iThe Ten Bells, inkantini endala eyasungulwa ngo-1752 futhi etholakala ekhoneni leCommercial St. neFournier St. eyayivame ukuvakashelwa ezinye zezisulu zikaJack. Ngaphandle kokungabaza, ukuphuza isiphuzo lapho kufanele kube nokuhlangenwe nakho okubandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izindawo ezi-5 zokuzithokozisa ukujabulela i-Halloween
Iholide laseCosta Rica eCaribbean
Vakashela eCastillo de los Guzmanes eNiebla, eHuelva